Shiineysku Gawaarida Birta ee Been Abuurtay oo leh Soosaarka Machining Sax ah iyo Hanvos
GEERKA BEEN -FURAY
Gaadhiga Rakaabka Rakaabka
Baabuurka Aluminiumka been -abuurka ah ee Baabuurka Ganacsiga
Tayada Sare ee Albaabka Aluminiumka Alwaaxda Albaabada ama Afka
Aluminium Been Abuurtay Gawaarida Gawaarida Gawaarida ee Dukaameedka dambe
Gawaarida birta ah ee la farsameeyay oo leh mashiinno sax ah
Gaadhi Been Abuur ah/Wheel Been Abuur ah
Sababta aad ugu Baahan Tahay Been Abuur
Giraangir Halkii aad Ka Gaadhi Lahayd?
Giraangiraha been -abuurka ahi way ka yar yihiin giraangiraha la shubay sababta oo ah hannaanka been -abuurka. Geedi socodka been abuurka ahi wuxuu ka dhigayaa giraangirihiina kuwo xoog badan, adkaysi badan oo adkaysi u leh daxalka iyo oksaydhka. Intaa waxaa dheer, hufnaanta qaab -dhismeedka giraangirku ma xuma. Giraangiraha la been abuuray waxay u muuqdaan inay leeyihiin waxqabad guud oo gaadiid oo aad u sarreeya iyo hufnaanta shidaalka oo la xoojiyay.
Si Loogu Daro Alloys
Gawaarida been -abuurka ah ee khafiifka ah ayaa bixiya faa'iidooyin tiro badan marka la barbar dhigo beddelka lloy cast. Kuwaas waxaa ka mid ah: Waxtarka shidaalka oo fiican (ilaa boqolkiiba toddoba); Qiiqa CO2 oo yaraaday; nabadgelyada la hagaajiyay; Nolosha dheer ee qaybaha hakinta iyo bareegyada; Ma aha in la sheego raacitaan raaxo leh.
Giraangirihii la been abuuray ayaa qiyaastii 20 % ka khafiifsan alaabooyinka la shubay, iyo laba jeer ka fudud sida giraangirta birta ah ee culeyska leh, oo ay weheliyaan sifooyinka nuugista gariirka oo aad u sarreeya.
Gawaarida been abuurka ah ee aadka u iftiimaya ayaa u taagan sidii qayb gooni ah oo matalaysa alaabada baabuurta ee fasalka ugu fiican. Kuwani waxaa inta badan adeegsada xirfadleyda taxanaha tartamada mootooyinka. Kuwani sidoo kale waxaa soo xushay xiisaha baabuurta adduunka oo dhan iyada oo ay ugu mahadcelinayaan dhimista miisaanka weyn iyo faa'iidooyinka kale ee muhiimka ah.
Giraangiraha ay soo saaraan farsamada been abuurka ah ee qaab-dhismeedka dhabta ahi aad bay u xoog badan yihiin, waarayaan, sidaas darteed, waa ammaan sababta oo ah heerka sare ee cilladda birta (comprstinb) iyo cilladaha efsvricolfasting-ka ee aan caadiga ahayn, sida daloolada iyo dildilaaca. Tan waxaa lagu gaaraa fiilo si habboon u habboon
Qaab -dhismeedka daawaha darajada aerospace iyada oo loo marayo saddex. cabbir-xiran
geeddi-socodka been-abuurka kulul ee saxaafadda hydraulic ee 10,000-15,000 tan oo xoog ah iyo iyada oo lala kaashanayo daaweynta kulaylka gaarka ah. Haddii ay saamayn lama filaan ah ku yeelato, giraangiraha been -abuurka ahi ma dillaaco oo waa la hagaajin karaa haddii loo baahdo.
Ka sokow ahaanshaha saddexaad ee ka fudud aluminium, giraangiraha been -abuurka ahi wuxuu leeyahay qiimayaal kulayl oo gaar ah oo sarreeya; 23 jeer ka sarreeya birta. Markaa, astaamaha maaddiga ah waxay xaqiijinayaan in kulaylka si dhakhso leh uga daadanayo giraangiraha iyo nidaamka bareegga, taas oo sii dheeraynaysa cimriga bareegyada iyo suufka bareegga. Intaa waxaa dheer, waxay matalaan qodob badbaado oo muhiim ah. Giraangiriirta been abuurka ah ayaa sidoo kale leh wax aad u sarreeya oo qoyan oo siinaya si fiican u nuugidda gariirka, naxdinta, saamaynta iyo buuqa
sidaas darteedna ay keento in si aad ah loogu raaxaysto raacitaanka darawalka iyo rakaabka iyo in la ilaaliyo nidaamka ka joojinta adeeg dheer.
Hore: Gaadhi Been Abuur ah/Wheel Been Abuur ah
Xiga: Gawaarida Gawaarida Gaarka ah
Tayada Sare ee Been Abuurka Aluminium Alloy Wheel ama ...
Been Abuurtay 5 Af -hayeenka Afka Alwaaxa Alwaaxa
Gawaarida Gawaarida Gawaarida 16-22 Inch Rims Car Fo ...
Farqiga u dhexeeya been abuurka iyo rogid
Waa maxay hawlaha fl fl baabuur la beddelay ...
Xaaladda ururka of forgings wheel af ...
NO.288 EE LINGXU LABA WADA, CIDONG BINHAI AGAALKA HORUMARINTA DHAQAALAHA, CIXI, MAGAALADA NINGBO, GOBOLKA ZHEJIAG, CHINA